Breaking: ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလက်၏ Big နှိုးဆော်သံနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်! မာတင် Vrijland
Breaking: ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလက်၏ Big နှိုးဆော်သံနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်!
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 11 2019 အပေါ်	• 10 မှတ်ချက်
ဥရောပ၏အကြီးဆုံးစက်ရုံအတွက်ပုန်းကွယ်သောခါနီးနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်၏အဓိကသက်ရောက်မှုယခုချက်ချင်းကြီးတွေနှိုးဆော်သံကယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်ပါ! အဆိုပါပင်မမီဒီယာဤအကြောင်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာ, ဒါပေမယ့်ခက်ခဲတဲ့ All-လွှမ်းခြုံခြိမ်းခြောက်မှုလည်းမရှိ။ သင်က Borssele နျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံများသို့မဟုတ် Tihange (ဘယ်လ်ဂျီယံ) သိသလော သငျသညျတခုပေါက်ကွဲနြူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏အဓိကသက်ရောက်မှုသိ? မှတ်သားကျေးဇူးပြုပြီး!
40 ကျော်မည်သူမဆိုမနေ့ကအဖြစ်ဧပြီလ 26 1986 အတွက်ချာနိုဘိုင်းနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်အောက်မေ့။ ယခုချောင်းမြောင်းတည်ရှိသည်သောနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်, အိမ်သို့အများကြီးပိုနီးစပ်တဦးတည်းလည်းမရှိ။ ထိုသို့သင်ဤသတင်းစကားထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါတယ် ASAP en တတ်နိုင်သမျှ ရှယ်ယာ! သငျသညျဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖယ်ထားပါနှင့်ယခုပြုမူ! ဒါဟာအလေးအနက်ပဲ! ဒါဟာင-mail ကဖက်စ်, ပုံနှိပ်, ရှယ်ယာရန်သင့်အလုပ်ရဲ့သင်သိလူတိုင်းလူမှုမီဒီယာကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူး။
ကျနော်တို့လူ့ဖြစ်တည်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဟာသူ့ရဲ့အဓိကအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အကြောင်းပြောနေတာကြသည်! ကျိကျိတက်အချိုးအစား၏နျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်! တစ်ခုပေါက်ကွဲနြူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုခေါ်ပေမယ့် 1 တုံ့ပြန်မှု: ပြတင်းပေါက်များနှင့်တံခါးများပိတ်ထားခြင်းနှင့်မကြာမီဖျောက်ရန်မြေအောက်ခန်း! ဗဟိုဥရောပမှာတစ်ဦးကနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်အားလုံးအစားအစာနှင့်သောက်ရေအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဓါတ်ရောင်ခြည်၏ပထမဦးဆုံးမိနစ်သင်အသက်ရှင်ဖို့အမှန်တကယ်နျူကလီးယားဗုံးအမိုးအကာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုရုတ်တရက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကကိုအခြားဒုတိယတစျခုမှလာလို့ပဲ။ ဒါဟာအပြာကနေတုံးများနှင့်ကြီးမားသောလေကြောင်းစီးနင်းလိုက်ပါရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ဖုန်းခေါ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းစိုးရိမ်မနှင့်အကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲကြသည်။
ဤရွေ့ကားနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်ညဉ့်အခါသူခိုးကဲ့သို့လာပါတယ်။ အဆိုပါနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လှုံ့ဆော်ပေး။ အဆိုပါနှိုးဆော်သံခေါင်းလောင်းထိုးအသံတိတ်ဖြစ်ကြပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်ဆက်လက်။ ယနေ့သင်တစ်ဦးပေါက်ကွဲနြူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံကနေဒုက္ခဆင်းရဲခေါ်ဆိုခကိုနားထောငျလြှငျ, သငျသညျအမိုးအကာမှ run လိမ့်မယ်။ သို့သော်အနံ့နှင့်အရသာမရှိသောဖြစ်သောအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့; တဖြည်းဖြည်းသင့်အိမ်ကြူးကျြောသောအဆိပ်; အရာအဆိပ်သင်သည်သတိထားမိကြဘူး, သင်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာရှူဖို့ဆက်လက်။ သို့တိုင်, ကသင့်ရဲ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏အဓိက၌သငျတာမျိုး။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် နြူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်.
ဖြည်းဖြည်းချင်းအထဲမှာခန္ဓာကိုယ်နှင့်ခြေလက်အင်္ဂါစိမ့်ဝင်သွားတယ်။ Unperturbed နောက်တဖန်ရိုးရှင်းစွာနောက်တစ်နေ့နံနက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူမ၏အချိန်ကြာပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းသူသည်သင်၏ဘဝ infiltrates ။ သင်သည်တစုံတခုကိုသတိထားမိခြင်းနှင့်သင့်ပတ်လည်ကြည့်ရှု။ အဘယ်သူမျှမကအားဖြင့်သင်တို့ကိုသတိထားမိတယ်။ ဘယ်သူမှစိုးရိမ်မဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှပြန်နှင့်ထွက်ပြေးဖို့အပူတပြင်းပုံရသည်။ လူတိုင်းအေးဆေးနှင့် Air-ဝင်ရောက်စီးနင်းနှိုးဆော်သံတိတ်ဆိတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တောင်မှရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတိတ်ဆိတ်။ သင်ရုံနောက်ဆုံးပေါ် Newsfeed ကိုကြည့်ကြလော့ ဘာမျှမမှားပါပုံရသည်။
ဒါဟာမှားယွင်းသောနှိုးဆော်သံသလိုပဲ, ဒါပေမယ့်မပါ! အဆိုပါပြဿနာကိုနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်၏ထိတ်လန့်သငျသညျခုန်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘေးဥပဒ်ကိုကြည့်ရှုလေ့လာမဟုတ်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သူ့ဟာသူတွေ့ရမယ်။ ဤဘေးဥပဒ်အတော်လေးမြုံဖြစ်ပါတယ်။ သားစဉ်မြေးဆက်တဆင့်ပြန့်နှံ့ဤဘေးဥပဒ်။ ဤဘေးဥပဒ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကရှုံးနိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအရမ်းအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ရေနံတင်သင်္ဘောများမှာ! မီဒီယာ, ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ထိန်းချုပ်အတိုက်အခံပြည်ကိုအုပ်စိုးအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့စောင်ကိုတင်သော flues ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဘရပ်ဆဲလ်နှင့် The ဟိဂ်အတွက်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူများ၏အဆိပ်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်း၌သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် '' မျက်စိကိုပိတ်နှင့် peckers '' ဟုဆို '' ယနေ့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုပါပဲ။
သူတို့ကပင်သင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးပါဝင်သူပါစေ။ သင်သည်သင်၏မဲန့်ပစ်နှင့်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှု select လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့အိမ်၏အက်ကြောင်းမှတဆင့်ထဲသို့ဝင်ရသောအဆိပ်နေဆဲသာယာသောတစ်ခုခုအနံ့ကြောင်းသေချာပါစေ။ သင်ပင်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူများဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်နှင့်၎င်း၏စနစ်များအဘို့သင်တို့ငွေကိုအလုပ်ဝင်ငွေလိမ့်မည်။ တီဗီတွင်သင်အကောင်းဆုံးအရသာနှင့်ချိုမြိန်အရသာ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုများကြည့်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူကိုသင်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးသည်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူကိုချစ်ရကြမည်။ ကျနော်တို့ကိုယုံကြည်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူအဲဒီမှာအမြဲရှိရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ကြသောကြောင့်, ငါတို့သည်ပိုကောင်းမသိရပါဘူး။ ထုတ်လုပ်သူအမြဲသူဌေးကဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကပိုရနှင့်အသစ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုပေးအပ်သည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းတတ်၏။ ရေဒီယို၌, TV နဲ့သတင်းစာ Matthijs နယူးအသင်းတော်များအတွက်အရသာရှိတဲ့အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ရောင်းချနေကြသည်။ အသစ်ကစက်ရုံ၏အသစ်ဘုတ်အဖွဲ့ကဒီအချိန်မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှတဆင့်ပင် tastier မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းဓာတ်ငွေ့အဆိပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်အဆိပ်ချိုအရသာများနှင့် ပို. ပင်မူးယစ်ပေးသည်။
စက်ရုံယင်း၏တည်ရှိမှု၏လိုအပ်ချက်ရောင်းဖို့ဆက်လက်သောကြောင့်, သူမကလူသည်အသက်ရှင်သောအခန်းများကိုကြောက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ ထို့ကြောင့်စက်ရုံအဆက်မပြတ် ပို. ပင်လက်နက်နှင့်အတူတကွပိုပြီးအကြမ်းဖက်မှုလွှဲနဲ့ပိုပြီးရာဇဝတ်ကောင်ပြသထားတယ်။ ပင်ကြည့်ရှုပြွန်နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သည်ဤအန္တရာယ်များဂိုဏ်းကနေဘေးကင်းလုံခြုံမရှိကြပေ။ သတင်းစာများ, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဆိပ်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံများ၏အုပ်ထိန်းသူများတိုင်းပြည်အတွက်အလွန်ကောင်းစွာ fit ဒါအိမ်များရှိလူအပေါငျးတို့သညျဤလုံခြုံရေးအလှနျဆပ်ဖို့လိုလိုလားလားရှိပုံကိုပြသနေသည်။ ထိုအတောအတွင်းသူတို့ရွှေအစိုဓာတ်ကိုမသောက်နှင့် telly သို့မဟုတ်အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံ၏အနုပညာရှင်တွေသကြားလုံးဖြန့်ဝေရှိရာကြီးမားသောအဆောက်အဦးမယ့်အပေါ်ဖျော်ဖြေရေးစောင့်နေကြလော့။ အဆိုပါအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံလူများအတွက်တော်တော်ကောင်းလှ၏။ သူမသည်လမ်းကွန်ယက်ကိုထိန်းသိမ်းထားအပေါင်းတို့နှင့်သောက်သုံးရေ, flues နှင့်အခြားသာယာအဆင်ပြေမှုများအဘို့အ pipework သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံအမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်တစ်နည်းနည်းပိုက်ဆံနှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံ၏ဒါရိုက်တာရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည်သောအခါ, တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူစုထဲကရှေးခယျြနိုငျသညျ။ ထိုအတောအတွင်းစက်ရုံ၏ဒါရိုက်တာများကိုအမှန်ပင်အလွန်အေးမြသောဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်သူတူဟောင်းရှယ်ယာရှင်များ၏ကြီးမြတ်-တူသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများ။ တချို့ကအဟောင်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အလွန်ခက်ခဲတခါတရံများမှာအရာ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥပမာအားဖြင့်, စဉ်းစားအတိအကျဘယ်သို့ဆို။ ဒါကအကြီးလူကိုပဲ! ဒါကြောင့်သူတို့ကငါပါဆုံးခွင့်ပြုခဲ့သည့်လူတစ်ဦးကိုရှေးခယျြရွေးကောက်ပွဲ၌သွားဖို့ငါ့ကိုခေါ်ကြသောအခါ။ ဤအချိန်ငါသိ: ကပုန်ကန်သောတပါ!
ကျွန်မအမှန်ပင်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူတို့ကပင်စောင့်ကြည့်လူတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဌာနရှိသည်ဒါကြောင့်စမတ်ကြောင်းကိုငါကြားရပြီ။ စက်ရုံထုတ်လုပ်သောအဆိပ်အမည်ရ comatose တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ပြည်နယ်ကလူစောင့်ရှောက်ခြင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲပဲသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြရသည်။ အခုတော့အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ပိုကြီးတဲ့ဆေးထိုးလိုအပျသူကလူကိုတခါတရံရှိပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ရုတ်တရက်စက်ရုံများ၏ရွေးကောက်ခံအစိုးရနှင့်အတူသဘောမတူနေကြသည်။ ဒါဟာအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သူအမှုအရာတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်ပင်သင်၏အိမ်နီးချင်းမတိုင်မီစုဆောင်းထားပြီးပုံရသည်။ သူတို့ကအစကလူအနည်းငယ်ရေနွေးငွေ့ကိုချွတ်မှုတ်ဖို့ခွင့်ပြု, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒပြပွဲများစည်းရုံး။
ဤမျှလောက်များစွာသောလူများကအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံစနစ်များပေါ်တွင်မူတည်ရှိပါတယ်ကြပြီ များစွာသောလူအလုပ်တစ်ခုရှိတယ် ဆက်စပ်သော of ပေး အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့စက်ရုံကြောင့်ပင်နေ့စဉ်ဘဝကနေအဆိပ်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံဖယ်ရှားစဉ်းစားရန်ကိုတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုလည်းပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လာလူအစဉ်အမြဲစက်ရုံနှင့်အမှန်တကယ်အဆိပ်အသစ်တစ်ခုဘုတ်အဖွဲ့မဲပေးစောင့်ရှောက်လော့။ သငျသညျ ecstasy တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနှင့်အတူနီးပါးနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
ယခင်ကလူတွေသူတို့ရဲ့ကောက်ဆွနှင့်အတူခုန်တက်တယ်အပေါင်းတို့နှင့်ရွက်ဖျင်တဲပိတ်ထားကြပြီ။ ထိုအတောအတွင်းစက်ရုံအစောင့်တစ်ဦးကြီးများစစ်တပ်ညျဆောကျခဲ့သညျ။ အဆိုပါစက်ရုံသူတို့နေရာတိုင်းအရာအားလုံးလူတိုင်း overhear ခြိမ်းခြောက်မှုဤမျှကြောက်လန့်သည်။ သူတို့အဲဒီမှာကဒီမှာရှိတိုက်ခိုက်မှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုခငျြတဲ့သူရိပ်ရတဲ့အမျိုးအစားများဖြစ်ကြပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာစက်ရုံနှင့်၎င်း၏မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကွန်ယက်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတိုးမြှင့်ဖြစ်လာနေသည်ဆိုသညျကားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလုပ်ပေးပေမယ့်ဒါက။ လူများတို့သည်အိမ်များတွင်မပါဝင်နိုင်စုပြုံလျှင်သူတို့ဘာလုပျမလဲ အဘယ်ကြောင့်အိမ်များရှိလူဒါယုံကြည်နဲ့အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံအပေါ်အားကိုးသွားရလဲ? သူတို့ကကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ဒါသူတို့အနံ့နှင့်အရသာရှိသောကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြပြီလား?
ယခင်ကလူတွေပိုပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ အခုတော့သူတို့ကလုံးဝမှီခိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့မေ့ဆေးမှနေသားတကျဖြစ်လာကြပြီးအမှန်တကယ်ကအသက်ရှင်ဖို့အဆိပ်၏မေ့ဆေးမပါဘဲကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုအောကျမေ့သောဤလူမြိုးကိုအဘယ်သူမျှလည်းမရှိ။
ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်, ငါကိုမဲပေးခွင့်မပေးဖို့မဝံ့။ ထိုအခါငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုပြု၏။ ထိုအခါကောက်ဆွ, ငါမရှိသည်။ တကယ်တော့ငါနှင့်ငါ့အိမ်နီးချင်းများကအရမ်းကြောက်တယ်မှီခိုလူသားတွေဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာငါတို့သည်ငါတို့၏ကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးရှိသည်။ သို့မဟုတ်ငါနေဆဲသူအမှန်တကယ်ကြောင့်အဆိပ်ဖယ်ရှားပစ်ရချင်ပါဘူးရှိမရှိ, ငါ့အိမ်နီးချင်းကိုမေးလိမ့်မည်နည်း ဒီတစ်ခါလည်းသူလညျးမိမိမဲမျက်ရည်? အဘယ်သူမျှမအိုးကြောင်းညာဘက်င်: သူစက်ရုံ၏အစောင့်အဘို့အအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်တဖန်ငါသူ့ကိုမေးကြမည်နည်း ဒါဟာအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ fucking ရဲ့!
သင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန့်နှံ့မြုံကြောင့်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ခြိမ်းခြောက်ဘို့အသေးစိတ်အတွက်သတိပေး Website တွင်ဒီမှာဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပါ။ အိမ်စာမကျြနှာသို့သွားပါနှင့်ပင်ဆောင်းပါးများမှတဆင့် browse ။ သငျသညျခုန်ရန်နှင့်ချက်ချင်းသင်တို့အပေါ်မှာင့်သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါအရေးယူရန်ရှိသည်မညျ! သငျသညျခကျြခငျြးသငျသညျမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုသတိပေးသင့်ပါတယ်! သို့သော်သင်တို့သည်အလျှင်းမပြုကြ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အပြည့်အဝကိုထူထောင်ထားပြီးသင်နှင့်သင်၏သားသမီးတော့ဘူးမရွှေ့နိုင်သည်အထိသငျသညျမဟုတ်ဘဲစောင့်ဆိုင်းချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင်အမှုအရာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်နှင့်သင်၏သားကဲ့သို့ကောင်းစွာထုတ်ကိုဖွင့်ပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် related န်ဆောင်မှုများအတွက်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုထင်ကြဘူး။ သငျသညျ passive ကျန်ရှိခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထောင်ထဲမှာနှင့်အဆိပ်သင့်တည်ဆောက်ရန်ကူညီနေကြပါတယ်။ အချိန် တော်လှန်ရေး!
5G နှင့် transhumanisering က Man
ဦးနှောက်-Computer ကိုရေတိုသက်တမ်းအတွက် Interfaces: Facebook ကိုမကြာမီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတှေးကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်နည်း အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Hololens2အင်တာနက်-ဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှသောအရာကိုတစ်အရသာ
အဘယ်ကြောင့် Luciferianism, စုန်းအတတ်နဲ့ transgenderism ခေတ်ရေစီးကြောင်းများမှာ
အဘယ်ကြောင့် Elon Musk ရဲ့ SkyNet, နာနိုနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးတက်မြန်းသည့်နေ့များနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်
11 မှမတ်လ 2019 10: 14
အပြင်မုသာစကားကနေကျနော်တို့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေလေ့လာသင်ယူ Self-လုံလောက်သောမဟုတ်ပေမယ့်စနစ်အရပျယူလူကြီးအဖြစ်။ ဖိနှိပ်မှုစနစ်နှင့်လူအများကိုလည်းသိမ်းယူ။ မသင်မနေရပညာရေး, မဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုး, အခွန်ထမ်း ... သင်သည်ထိုသူတို့အာဏာနဲ့သူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်ရှိသူတို့ဥပဒေပြုမထီမဲ့မွပဋိသန္ဓေယူစဉ်အခါ, ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုနေကြသည်။
သငျသညျငါရှေ့နေများအဘို့အကြှနျုပျ၏အသက်တာ၌ဖြစ်ရပြီမည်မျှခြိမ်းခြောက်အက္ခရာများကိုမြင်သောအခါ, သင်သည်ဤဒီမိုကရေစီခဲ့ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။ yeah အိုး ... သင်တန်းတိုင်ကြားပေမယ့်ညာဘက်ဖြစ်ခြင်းအခြားဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်။
သငျသညျကို right ... သာ, အသိဉာဏ်ဖန်တီးမှုနှင့်အလုပ်ကြိုးစားသူဝိညာဉျအောင်မြင်သောကြောင့်ထိုအခါသင်သည်ကိုယ့်မိုက်မဲနေအောင်မြင်ကြသည်မဟုတ်လော
11 မှမတ်လ 2019 10: 22
နောက်တဖန်ခုခံတီထွင်ခဲ့သောအလုပ်မလုပ်ပါဘူးသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကများနှင့်အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးတွေဒေတာနဲ့ AI စနစ်များကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ vangen..en နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ပေမယ့်အလုပ်အကျဉ်းစခန်းထဲမှာ
11 မှမတ်လ 2019 10: 49
တိုက်ဆိုင်ငါနေဆဲကောက်ဆွ, hoes နှင့်လက်ကိုင်အလုံအလောက်ရှိပါတယ် ... နှစ်ခု chainsaws အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအသစ်တော tools တွေအပြင်, (စူးရှ) ပုဆိန်အပါအဝငျ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါငါ့ကိုသွားကြဖို့လေဘယ်လိုသိ! ကျနော်တို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းအိတ်ကပ်, သူတို့ကသိမ်းပိုက်ပါဘူးထောက်ပံ့ပေးနိုငျသောကွောငျ့ကနျြောတို့ကြောင့်အလုပ်အကျဉ်းစခန်းထဲမှာဖြည့်ဆည်းရသောအခါအဘို့အဒီတစ်ခါလည်းနေရာလေးကို။
11 မှမတ်လ 2019 11: 52
ပထမဦးစွာငါသည်သင်တို့ကိုပုံအကြောင်းကိုအများကြီးမကျင့်သောသင်ပြောပြရပေမည်။ အဆောက်အဦးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌နေ့ညဉ့်တစ်ဦးခြားနားချက်ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့လမ်းလျှောက်နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံပေါက်ကွဲလိမ့်မယ်ပါပြီလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအေးစနစ်များကိုအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်လုံခြုံရေးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင်အက်ကွဲကြောင်းစစ်ဆင်ရေးထိခိုက်ကြသည်မဟုတ်။ ငါအဘို့အဂရုစိုက်အဖြစ်အပြင်ဓါတ်ပေါင်းဖိုတန်ဆာများကိုဒတ်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီးထိုအက်ကွဲကြောင်းအထဲတွင် (အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းထုတ်လုပ်မှု) တို့သေးအပ်ကြောင်းအစမှသိသည်။
11 မှမတ်လ 2019 11: 55
11 မှမတ်လ 2019 11: 59
(ဂရိ metaphora ထံမှ: လွှဲပြောင်း; နာမဝိသေသန: ပုံဆောငျသဘောအရသို့မဟုတ်တင်စားမှုများကို; ဆန့်ကျင်ဘက်: စာသား) တစ်ဦးကဥပစာတစ်သွယ်ဝိုက် (unspoken) ညီမျှခြင်းရှိထားတဲ့အတွက်ပုံရိပ်တစ်ခုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
11 မှမတ်လ 2019 12: 49
ဘယ်လ်ဂျီယံ hahahahaha! ပြဿနာ / action ကို / အဘယ်သူမျှမဖြေရှင်းချက်🙂
11 မှမတ်လ 2019 14: 58
nice ဆောင်းပါးသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချိန်နှင့်အာရုံစိုက်မှု။ ငါ့ကို asap စစ်အစိုးရကပြောင်းလဲမှု, စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီနှင့်အတူကဲ့သို့သောသမ္မတနိုင်ငံ, စစ်မှန်သောအခွင့်အရေးများသည်။ ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြထားအဖြစ်ဒါပေမယ့်ဘုံကလူကျွန်ပုံမှန်အတိုင်းသံသယရှိသူ, အအပြင်ကလူ၏ရေးသားခဲ့သည်ချင်ပါတယ်။ ဘုံကလူကိုတောင်သူတို့ရဲ့လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းများနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းသံသယရှိသူကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Zombiland နယ်သာလန်, အဓိကပုံမှန်အတိုင်း suspectslanden, ကြွေးရှင်နိုင်ငံကမြီစားနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုသူတို့၏နှင့် zijn.etc စသည်တို့ဆိုးဆိုးရွားရွားခွေုံတိုင်းပြည်မလွှတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, ညစ်ညမ်း, ကလေးညစ်ညမ်း, ငွေကြေးခဝါချမှုတိုင်းပြည်, ပြည်။ ဒါကပုံမှန်အတိုင်းသံသယရှိသူသူတို့ရဲ့ key ကိုရာထူးလက်နက်ချခဲ့ကြရာမှသာကွာခြားသည်။ အဲဒီဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်မကူညီကြဘူးကတည်းကပါဝင်ဆောင်ရွက်။
11 မှမတ်လ 2019 22: 32
သငျသညျမှတစ်ဦးကလှပသောကြော်ငြာတိုတဲ့ "နျူကလီးယားကပ်ဘေး", တဖန်အချို့အခြားအလမ်းကိုတက်ခါလိုက်ကြလော့။
12 မှမတ်လ 2019 06: 10
ရလဒ်အဖြစ်သင်ကိုယ်တိုင် reprogram ရန်သင်ယူနှင့်သင်အပြင်ဘက်အဆိပ်ဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုအဆုံးသတ်။
Agnes Jonckheere op အဆိုပါထောက်ခံသူများတိုက်ခိုက်နေ "မတူကွဲပြားမှုများနှင့်နိုင်အောင်" စဉ်းစားနေစဉ်အတွင်းအဆိုပါသက်တံ့ကတော့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဘာသာတရားဖြစ်ပါသည်
Danny op ဂျက်ဖရီ Epstein ၏အမှု၌လိပ်အဲဒီမှာအကြီးအကဲဖြစ်ပါသလား